शिक्षाका लागि विद्यार्थी विदेशिदा देखिएका केहि तथ्यहरू:: Artha Dabali
शिक्षाका लागि विद्यार्थी विदेशिदा देखिएका केहि तथ्यहरू
प्रकाश पाण्डे , पूर्वअध्यक्ष, नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ
नेपाली विद्यार्थीहरू विदेशमा उच्चशिक्षा आर्जनसँगै आकर्षक आम्दानी हुने भएकोले लाखौं खर्च गरेर विदेशिने गरेका । स्वदेशमा परम्परागत शिक्षा प्रणाली हुनु, व्यवहारिक र प्राविधिक शिक्षाको कमि, र योग्यता अनुसारको रोजगारीको अभाव लगायतका कारणले विद्यार्थीहरू विदेश जान बाध्य हुनु परेको सरोकारवालाहररू बताउँछन् ।
नयाँ पुस्तामा पछिल्लो समय विदेशी शिक्षाको मोह ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । विश्वस्तरिय शिक्षा, व्यवहारिक ज्ञान, सीप र आकर्षक आम्दानी, त्यहाँको जीवनशैलीमा रम्ने अवसरले यसमा मूख्य भूमिका खेलेको देखिन्छ । बढ्दो आधुनिकतासँगै नेपालको सामाजिक संस्कृति पैसाप्रति आकर्षित देखिनुको प्रभावले पनि बाहिरी मुलुकमा विद्यार्थीहरु जान लालायित देखिन्छन् ।
नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ (ईक्यान) ले आयोजना गरेको शैक्षिक मेलाको अवसरमा शिक्षका लागि नेपाली विद्यार्थी विदेशिदा देखिएका केही तथ्यहरू बारे पूर्व–अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेसँग गरिएको कुराकानीको सार :
ग्लोबलाइजेसनको प्रभाव : शिक्षामा उत्कृष्टता
अहिलेको युग विश्वव्यापीकरणको हो । विश्वव्यापीकरण विकासका हरेक क्षेत्रमा फड्को मार्ने कारण बनेको छ । यसको प्रभाव विश्वको शिक्षा प्रणालीमा परेको देखिन्छ र यस्तो किसिमको शिक्षाबाट नेपाली विद्यार्थीहरू पनि अछुतो छैनन् ।
फलस्वरूप: आफ्नो ज्ञान, सीप र क्षमतालाई ग्लोबलाइजेसन गर्नको लागि नेपाली विद्यार्थी विश्वका विभिन्न कुनामा पुग्ने गरेका छन् ।
पछिल्लो समय सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भित्रिएको आधुनिकीकरणले विश्वका जुनसुकै देशमा बसेर प्रतिस्पर्धामा उत्रिन सकिन्छ । जस्तो अमेरिकामा बसेर नेपालमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ । सञ्चारका विभिन्न माध्यमहरू आएका छन् जसको प्रयोगले आम मानिसको जीवनशैलीलाई प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ ।
त्यस्ता किसिमका सञ्चार माध्यमहरूलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्दछ । यसकारण पनि अब ग्लोवलाइजेसन स्टान्डर मिट गर्ने किसिमको शिक्षाको आवश्यकता छ । े
आर्थिक उन्नति, उच्च ‘लिभिङ स्टान्डर’
विकसित मुलुकहरूमा शैक्षिक वातावरण उत्कृष्ट छ । यद्यपि, पछिल्लो समयमा नेपालको शैक्षिक प्रणालीमा पनि परिवर्तन आइरहेको छ तर अझै पनि आमूल रूपमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । किनभने हामी पुरानै स्वरूपको शैक्षिक पद्धतिमा अल्झिएका छौँ ।
यस परिवेशमा विदेशको शिक्षा र सीप सिक्नु आवश्यकता मौ होइन बाध्यता समेत भएको छ । यही आवश्यकतालाई अनुभवको आधारमा उपयोग गर्न सकियो भने त्यो व्यवहारिक हुन्छ ।
अर्को कुरा, गुणस्तरिय शिक्षा लिएका विद्यार्थीहरूमा आत्मविश्वास बढ्छ । उनीहरू विश्वका जुनसुकै देशमा पनि सजिलै प्रतिस्पर्धामा उत्रिन सक्छन् ।
नेपाली विद्यार्थीहरू आफ्नो भविष्य सुरक्षित गर्नका लागि विदेशिएका हुन् । उनीहरूको लिभिङ स्टान्डर, इकोनोमिक इन्सेन्टिभ फ्युचर प्रस्पेक्टिभ हुन सक्छ ।
यसकारण पनि अवसर पाएको अवस्थामा उनीहररू विदेशमै बस्न इच्छुक हुन्छन् । तर यसो भन्दैमा हामी नकारात्मक हुनुपर्ने कारण नै छैन । किनभने यसरी विदेशिएका विद्यार्थीहरूको माध्यमबाट नै नलेज, रेमिट्यान्स, लगानी, अवसर, सूचना लगायतका कुराहरु भित्रिन्छ । जसले देशको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।
लामो समय विदेशमा वसेका वसेका मानिसहरुले अन्तत स्वदेशमा फर्केर लगानी गरेको उदाहरणहरु पनि हामीसँग छन् । हामीले तुरुन्त रेस्पोन्स खोज्नुहुँदैन ।
विदेशमा नै वसेको भए पनि उनीहरू नेपालकै सम्पत्ति हुन् । नेपालको अस्थिर राजनीतिक वातावरण र रोजगारको समस्याले मात्र नभई पछिल्लो समय ‘ग्लोवलाइजेसनको कारण पनि मानिसहरूको चाहना इच्छामा परिवर्तन आएको देखिन्छ, जुन स्वभाविक हो । यो प्रवृत्ति नेपालमा मात्रै होइन विश्वका जुनसुकै देशमा पनि देखिन्छ ।
विदेशमा अध्ययन गर्दा गुणस्तरीय शिक्षा, शिक्षा अनुसारको काम र काम अनुसारको आम्दानी पनि पाइन्छ ।
तर नेपालमा भने पछिल्लो समय शैक्षिक बेरोजगारको संख्या बढिरहेको छ । शिक्षाअनुसारको काम पाइदैन, सेवा सुविधाको त कुरै छोडौँ ।
यसकारण पनि विद्यार्थीहरू अवसर र भविष्यको खोजीमा विदेशिएका हुन् । नेपालमा पछिल्लो समयमा केहि परिवर्तनहरू देखिएका छन् । अझै यसलाई परिवर्तन गर्दै जाने हो भने यो क्रम स्वतः कम हुँदै जानेछ ।
विदेशिनु डरलाग्दो स्थिति : आकर्षण गर्न नसक्नु राज्यको कमजोरी
नेपाली विद्यार्थीहरू विदेश पलायन हुँदा दीर्घकालिन रूपमा निकै डरलाग्दो स्थिति नआउला भन्न सकिदैन । शैक्षिक जनशक्ति यसरी पलायन भइरहने हो भने नेपालको विकासको गतिमा निश्चय पनि बाधा पर्छ ।
एकदिन उर्जाशिल जनशक्ति नै नरहने अवस्था पनि आउन सक्छ । विकास निर्माणका कार्य नै ठप्प हुने स्थिति पनि आउन सक्ला ! देशको समृद्धिका लागि विदेशमा सिकेको ज्ञान, सीप र क्षमता उपयोग गर्नैपर्छ । यसका लागि त राज्यले विदेशिएका जनशक्तिलाई फर्काउन सक्नुपर्दछ र नेपालमा भएका दक्ष जनशक्तिलाई पनि यही रोक्न सक्नुपर्दछ । राज्यले अवसर प्रदान गर्नुपर्दछ ।
लगानीको वातावरण तयार गर्नुपर्दछ । पछिल्लो समयमा सामाजिक प्रतिष्ठाको लागि विदेशिनु फेसन जस्तै बनिसकेको छ । समाज गलत दिशातिर गइरहेको छ । गुणस्तरिय शिक्षा र अवसरको वाहानामा कतै देश युवाविहिन हुने त होइन ? यो एउटा गम्भिर प्रश्न बनेको छ ।
तर, विदेशको विकास पद्धति बुझ्न सिक्न, विश्व समुदायसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने योग्यता हासिल गर्नको लागि पनि नेपालीहरू विदेशिनु पर्दछ । बरु ती जनशक्तिलाई कसरी नेपाल फर्काउने र उनीहरूको ज्ञान, सीप, र क्षमतालाई कहाँ कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा अहिलेको बहसको बिषय हो । जुन राज्यको नीतिमा भर पर्छ ।
विदेशमा विद्यार्थी पढ्न जाने सवालमा नेपाल स्रोत मुलक नै भएको छ । राजनीतिक द्वन्द्व तथा अस्थिरताको कारण पनि शैक्षिक वातावरण राम्रो भएन/ हुन सकेन ।
जसले विद्यार्थीहरूलाई विदेशिन एक हदसम्म बल दियो । उत्कृष्ट शिक्षा दिन नसक्नु राज्यकै कमजोरी हो । विद्यार्थी विदेशिदा श्रम, शक्ति र पैसा पनि विदेशिएको भन्ने तर्क कतिपय अवस्थामा ठीक देखिए पनि देशको आर्थिक वृद्धिमा भने ठूलो सहयोग पुगेको छ ।
तर, विदेशिएको विद्यार्थीको सुरक्षार्थ सरकार मौन छ । ती विद्यार्थीहरूको कम्तिमा बीमा व्यवस्था हुनुपदथ्र्यो । जसले राज्यलाई वित्तिय सहयोगसम्म पुग्थ्यो ।
अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा लिएका विद्यार्थीहरूको ज्ञान, सीप र क्षमतालाई कसरी देशमा उपयोग गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले बहस गर्नु जरुरी छ । विशेषतः उनीहरूबाट रेमिट्यान्स मात्र आश नगरी स्वदेशमै फर्कने वातावरण सिर्जना गर्नु अहिलको मूख्य चुनौती हुन् ।
नीतिगत समस्या : सधैँ उल्झनमा सरकार
व्यवसायिक रूपमा भन्ने हो भने नीति स्पष्ट नहुनु अहिलेको मूख्य समस्या हो । विदेश पुगिसकेकाहरूले उता के गरेका छन् ? नेपाल कुन हैसियतमा फर्किए वा उतै बसे ? सरकारसँगै कुनै तथ्याङ्क नै छैन र चासो पनि राखेको देखिदैन ।
मन्त्रालयसँग व्यवस्थित नीति र कानुन नहुँदा हजारौँ विद्यार्थीहरू प्रभावित छन् । बरु उल्टै राज्यले विद्यार्थीको आफ्नो छनौटमा पढ्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गरेको छ ।
कुनै पनि प्रावधान सम्बन्धित सरोकारवासँग छलफल नगरी ल्याएर नो अब्जेक्सन लेटर दिनमा तगारो बनेको छ । यहाँ प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षा उपलब्ध छैन, अध्ययन अनुसारको रोजगार छैन । काम/पेशाको सम्मान छैन । युवापुस्ता अवसरको खोजीमा भौतारिन बाध्य छन् । यो सबै देशको शैक्षिक नीतिका कारण सिर्जिएको समस्या हो ।
यी समस्याहरूलाई चिर्दै अब सरकारले नेपाललाई नै एक उत्कृष्ट शैक्षिक गन्तव्यको रूपमा परिचय बनाउनु पर्दछ । कसरी नेपाल शैक्षिक गन्तव्य बन्न सक्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
विदेशी परामर्शदातृ नेपालमा अनावश्यक
राज्यले नेपाली विद्यार्थी विदेश पढ्न जानैपर्छ भन्ने नीति अवलम्बन गर्न खोजेको हो, नेपाली परामर्शले नधानेको भए विदेशी परामर्शदातृ ल्याउनु ठीकै हो । तर, यहाँ विद्यार्थी विदेशिनबाट पनि रोक्न खोज्ने ? कन्सलटेन्सी दर्ता पनि रोकी राखेको छ भने बाहिरको कन्सल्टेन्सी किन आवश्यक छ ?
राज्य दोहोरो चरित्र निभाउँदै छ । हामीलाई सामान्य लगानीको आवश्यकता भएको होइन । बरू उत्पादनमुलक क्षेत्रमा ठूला प्रोजेक्ट आवश्यक छ सरकारले ध्यान त्यता दिनुपर्ने हो । त्यसैले २०/३० लाख लगानीमा आउने त्यो पनि कन्सल्टेन्सी क्षेत्रमा आउने लगानी नेपाललाई आवश्यक छैन यो देशकै हितमा छैन । यहिँका पर्याप्त छन्, उत्कृष्ट छन् ।
परामर्श संस्थाको भूमिका र व्यवस्थापन
शैक्षिक परामर्शदातृ संस्थाले विदेश पढ्न जान चाहने विद्यार्थीलाई कुन देशको शिक्षा प्रणाली कस्तो छ ? कसरी जाने ? गएर कसरी पढ्ने वा कति वेला काम गर्ने लगायतका विषयमा परामर्श दिइनु पर्दछ । आवश्यक भाषा प्रशिक्षण, भिसा प्रोसेस लगायतका काम पनि कन्सल्टेन्सीकै भएकोले विद्यार्थीलाई सही मार्गदर्शन गरेर एउटा पुलको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । हामीले त्यो गरेका छौं । गर्नका लागि आग्रह गरेका छौं ।
पूर्व अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेसँगको कुराकानीमा आधारित